Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || गजल विवादमा अल्झिन आवश्यक छैनः केशवराज आमोदी – kayakairan.com
गजल विवादमा अल्झिन आवश्यक छैनः केशवराज आमोदी
३२ श्रावण २०७६, शनिबार १५:१३
केशवराज आमोदी ६३, चितवनको साहित्यिक जगतमा सुपरिचित नाम हो । उनलाई हामीले मेरो सिर्जना स्तम्भको साउन महिनाका पाहुनाका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौं । समालोचकीय हिसाबले कलम चलाउने उनको शास्त्रीय गजल लेखनमा बलियो स्थान रहेको छ । लामो समयको प्राध्यापन पेशाबाट निवृत्त आमोदी विशेषगरी शास्त्रीय छन्दमा गजल लेख्छन् । छन्द भनेको के हो ? छन्दमा कसरी गजल लेख्ने ? भन्ने विषयमा उनले थुप्रै सामग्री लेखेका छन्, छापिएका छन् । त्यसैले उनलाई गजलविद् भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ । आमोदी जिल्लाका विभिन्न साहित्यिक संस्थासँग पनि आबद्ध छन् । वाल्मीकि साहित्य सदन रत्ननगरका उनी संस्थापक अध्यक्ष हुन् । उनका करिब एक दर्जन कृति प्रकाशित छन् । उपन्यास, खण्डकाव्य, गजल, गजल सिद्धान्तलगायतका कृतिहरु उनले प्रकाशित गरिसकेका छन् । उनी करिब दुई दर्जन जति पुरस्कार र सम्मानबाट सम्मानित छन् । मेरो सिर्जना स्तम्भअन्तर्गत साउन महिनाका शनिबारका श्रृंखलाहरुमा उनका विविध समालोचकीय सामग्रीहरु प्रस्तुत ग¥यौं । महिनाभरको सिर्जनात्मक सहकार्यका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आज अन्तिम श्रृंखलामा उनीसँगको कुराकानी प्रकाशन गरेका छौंः
गजलमा देखिएको चारु विवाद के हो ? एकाएक कसरी आयो यो ?
प्रश्नको लागि धन्यवाद । म गजलको सामान्य विद्यार्थी हुँ । मैले गजलका बारेमा बोलेर केही अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन तैपनि उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु । चारुको पर्याय सुन्दर, रुचिर, साधु, शोभन, मनोरम आदि हुन सक्दछन् । तर, गुरु परम्पराको शालीन गजलको इतिहासमा लिङ्ग पहिचान हुने गरी गजल लेखिँदैनन् । लेखिए पनि सचेत पाठकले अड्कलले मात्र थाहा पाउने गरी प्रतीक बिम्बका माध्यमबाट लेखिन्छन् । चारुका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमार्फत चितवनका स्रष्टाहरू पुष्प अधिकारी अञ्जलि, अम्बिका कार्कीले जवाफ दिएका छन् । विनोद अनुजले त झन् एक अनलाइनमार्फत यसको राम्रो उत्तर दिइसकेका छन् । साहित्यका चार प्रमुख विधाहरू (कविता÷नाटक÷निबन्ध÷आख्यान) छन् । यिनमा कुनैपनि विधालाई कुन पुरुष र कुन नारीले लेख्ने भनी छुट्याइएको छैन । नेपाली व्याकरणमा समेत लिङ्ग ओझेल पर्दै गएको अवस्थामा नारीको विपरीतार्थक पुरुष भएझैं गजलको विपरीतार्थक शब्द उर्दू, फारसी, तुर्की, हिन्दी, नेपालीमा के हुनसक्दछ ? खुट्याउने अवस्था नेपाली भाषामा म देख्दिन । यस्तो अवस्थामा ‘पुरुषले गजल र महिलाले चारु लेख्ने’ भनी कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लाई दोहो¥याउन म सक्दिन । गजल शब्द ‘रुढ’ भइसकेको अवस्थामा त्यसको विपरीतार्थी शब्द खोजेर गजलमा लिङ्ग विभेदीकरणका अभियन्ता एवं गजलका गुरु गालिबहरूले देलान् र नयाँ विधालाई सिद्ध गर्लान्, बाटो हेरौं न ।
खास गरी कस्ता गजललाई हामीले असली मान्ने ?
गजलको आफ्नै मौलिक सिद्धान्त र स्वरूप छ । यहाँ त्यसको विवेचना सम्भव छैन । सामान्यतः वास्तविक गजलका निम्ति निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ–
गजल लयात्मक श्रुतिमधुर पदावलीयुक्त सुन्दर शेर समूहको माला हो । असली वा सुन्दर गÞजÞलका निम्ति निम्न तीन कुराहरूको खाँचो हु्न्छ–
१. सरल, सरस र सहजशैलीमा लय नबिगारी आफ्ना यथार्थ अनुभूतिहरुलाई समेटी बिम्ब, प्रतीक र उपमाले सिंगारेर लेखिएका गजलहरु ।
२. सकेसम्म उर्दू–फÞारसी बहर वा स्वनिर्मित लय वा ताल वृत्तले युक्त गजलहरू ।
३. गेयात्मकता र समसामयिकतालाई केन्द्रमा राखी रदिफ काफियालाई आकर्षक ढंगले प्रयोग गरी लेखिएका गजलहरू ।
गजलमा बेला–बेलामा यसरी विवाद आउनु कत्तिको राम्रो कुरा हो ?
हामी गजल लेख्न सिकिरहेका छौं । हामीलाई आज पनि गजलका संरचनामा प्रयोग हुने जुज, रुक्न, अर्कान, बहर र जिहाफ वा मात्रा गिरावटका वारेमा त्यति जानकारी छैन । सकारात्मक चिन्तनद्वारा तर्क वितर्क हुनु राम्रो कुरो हो । गजल निर्र्मिितका सयौं सूत्रहरू छन् । तर, हामीलाई एउटा सूत्र प्रयोग गरी राम्रो गजल रचना गर्न पनि धौ–धौ परिरहेको अवस्थामा काशी जानु कुतीको बाटो भने झैं एकाएक अर्थहीन विवाद आउनुले कुनै माने राख्दैन ।
गजल लेख्दै गरेको पुस्ता यस्ताखाले विवादमा अल्झिनु कत्तिको उचित हुन्छ ?
गजल लेख्दै गरेका पुस्ताले अध्ययन अभ्यास र साधनामा तल्लीन भएर लाग्नुपर्छ । बाहिरी विवादमा अल्झिन आवश्यक छैन । कौवाले कान लग्यो भनेर कागको पछि दगुर्नु हुँदैन ।
खासगरी नेपाली साहित्यमा गजलको उपस्थिति कुन स्थानमा छ ?
यतिखेर गजलका कृतिहरू नै बढी प्रकाशनमा आइरहेका छन् । प्रकाशनमा आएका सबै कृतिहरू सुन्दर छन्, अब्बल छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । तैपनि केही कृतिहरूले भरोसा जगाएका छन् । सुन्दर भविष्यको संकेत गरेका छन् । तिनले नेपाली साहित्यमा राम्रो स्थान बनाइरहेका पनि छन् ।
तपाईं पुस्तक पनि पढ्नुहुन्छ । खासगरी कस्ता पुस्तक पढ्न रुचाउनुहुन्छ ?
हो, म पुस्तक पढ्न मन पराउँछु । पहिले शिक्षण कार्यबाट फुर्सद निकाल्नुपथ्र्यो पढ्नलाई । अहिले अवकाश प्राप्त जीवन व्यतित गर्दैछु । फुर्सद अलि बढी छ पहिलेका तुलनामा । म ठान्छु पुस्तक पढ्नु आफूलाई ताजा राख्नु हो । म आफूलाई ताजा राख्नकै लागि पुस्तक पढ्छु । फुर्सदका समयमा गजल, मुक्तक, कविता र आख्यानका साथै दर्शनसम्बन्धी पुस्तकहरू पढ्न रुचाउँछु । गैरआख्यानका कृतिहरू पनि मलाई मन पर्छन् ।
अहिले पढ्दै गरेका पुस्तक कुन–कुन हुन् ?
पौराणिक आख्यानसित सम्बन्धित चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणीको ‘द्रौपदीकी महाभारत’, अयन प्रकाशन महरौली नई दिल्लीबाट प्रकाशित डा. तारा गुप्ताको ‘मौनकी बाँसुरी’ (गजल संग्रह) र उत्कर्ष प्रकाशन मेरठबाट प्रकाशित डा. सरोजिनी तन्हाको ‘सिसकता दिल’ (गजल संग्रह) र पहिले पढिसकेकै भए पनि मदनमणि दीक्षित लिखित ‘माधवी’ पुनः पढ्दैछु । मदनमणिकै ‘ऋग्वैदिक नारीचरित्र’ ले पनि मलाई आकर्षित गरेको छ ।
किताब किन्ने आधार केलाई बनाउनुहुन्छ ?
लेखकीय प्रभावले पनि किताब किन्न लगाउँछ । तर, लेखकीय प्रभावकै कारण कहिले काहिँ किताब किन्दा झुक्किएको छु । मलाई लाग्छ किताब किन्ने आधार विषयबाट तय गर्नुपर्छ । मिडिया र सामाजिक सञ्जालले पनि यसमा सघाउँछन् । साथीभाइहरू र सुधीजनका सिफारिसलाई पनि म किताब किन्ने आधार बनाउँछु ।
यसमा किताबको आकारले समय निर्धारण गर्दछ । छनोटमा रुचिका पुस्तक फेला परे छिटो पनि सकिन्छ । कहिलेकाहिं राम्रो भनी छानेका किताब पढ्न नसकेर बीचमै छाडेको पनि छु । सामान्यतया कुनै लेखकको अगाडिका उत्कृष्ट किताब पढेका आधारमा यो पनि राम्रै होला भनी किनिएका पछिल्ला पुस्तकबाट यस्तो संकट आएको छ ।
पढ्न रुचि राख्ने गुरुहरू वा साथीहरूसँग सल्लाह लिनुहोस् । कुनै पुस्तक पसल नजिक उभिएर हेर्नुहोस्, किन्नेहरूले के कस्ता पुस्तक छनोट गरिरहेछन् गहिरिएर ध्यान दिनुहोस् । हुन त भीडका रुचिका आधारमा मात्र किताब किन्दा आफ्नो रुचिको भन्दा फरक पर्न सक्छ । आफ्नो रुचिलाई पनि ध्यानमा राख्नुहोस् । सस्ता लोकप्रियता हासिल गर्ने खालका किताबबाट बच्नुहोस् । किताब किन्दा किताबका केही अंश पढेर छान्दा पनि तपाईंको रुचिसँग मेल खानसक्छ ।
पछिल्लोपटक बजारमा आएका पढ्नैपर्ने राम्रा पुस्तक कुन–कुन होलान् ?
हाल आख्यानमा रवीन्द्र समीरको ‘मृत्युको आयु’ उपन्यास आएको बजारमा आएको छ । यसमा प्रयोग भएको शैली परम्परा भिन्न शैली हो । यसैले मेरो दृष्टिमा यो कृति पठनीय छ । निर्मोही व्यासकृत ‘तस्विर तिम्रै’ मुक्त काव्य पनि चित्ताकर्षक छ । मुक्तक लेख्न रुचाउनेहरूका लागि यो पुस्तक उपयोगी हुने ठान्दछु । मदनमणि दीक्षितको ‘ऋग्वैदिक नारीचरित्र’, दुर्गा सुवेदीको ‘विमान विद्रोह’, नरहरि आचार्यको ‘गणतन्त्रको यात्रा’, जगत नेपालको ‘विपीको विद्रोह’ अहिले बजारमा आएका पुस्तकहरूमा पढ्नैपर्ने पुस्तक हुन् भन्ने लाग्छ मलाई ।
गजल लेख्ने, साहित्य अध्ययन गर्ने पुस्तालाई तपाईंको सुझाव के रहन्छ ?
गजल लेख्ने हुन् वा अन्य विधाहरूमा कलम चोप्ने हुन्, सबैले साहित्यिक ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नुपर्दछ । समसामयिक धारलाई समातेर अघि बढ्नका निम्ति पनि अध्ययनको अपरिहार्यता रहन्छ ।
अन्तमा, मेरा कुराहरूलाई महत्व दिई प्रकाशन गर्नुहुने पत्रकार एवम् गजलकार लेखराम सापकोटासहित कायाकैरन परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दछु ।